मेची–महाकाली अभियानको सन्देश - Naya Patrika
सूर्य थापा | चैत ०६, २०७३
नेकपा (एमाले)को मेची–महाकाली राष्ट्रिय अभियान झापाको काँकडभिट्टाबाट सुरु भएर कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा समापन र सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा घोषणा-सन्देश सभा गरी सम्पन्न भएको छ । यस अभियानले तराई–मधेसका २२ जिल्ला र सिंगो देशलाई केन्द्रित र जागृत गर्ने, तरंगित र प्रभावित गर्ने, पार्टीको दृष्टिकोण प्रवाह गर्ने र राष्ट्रिय एकताको पक्षमा आमजनधारणा बनाउने महत्वपूर्ण काम गरेको छ । मेचीको सीमावर्ती बजार काँकडभिट्टामा २१ फागुनमा सुखानीका सहिदहरूको स्मृति दिवस पारेर पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गरेपछि यो अभियान पश्चिम नेपालतर्फ अघि बढेको थियो ।
राजविराजमा किन त्यस खालको आक्रमणको घटना भयो ? राजविराजमा पुग्दा किन अभियानलाई त्यसरी सेबोटेज गर्न खोजियो ? यो अत्यन्त महत्वपूर्ण तर अनुत्तरित प्रश्न रहेको छ । यदि यो अभियानको सिलसिला सिराहाको गोलबजार, सर्लाहीको हरिऔन, बारा–पर्साको जितपुर, रौतहटको चन्द्रनिगाहपुर र गरुडा बजार छिचोलेर महोत्तरीको बर्दिवास र धनुषाको जनकपुर पुग्ने कार्यक्रम नरोकिएको भए तराई–मधेसमा विद्यमान भ्रमको तुवाँलो हट्ने निश्चित थियो । यस अभियानले सिंगो तराई–मधेस क्षेत्रलाई राष्ट्रिय एकताको नयाँ सूत्र र भावधारमा जोड्ने काम गर्ने माहोल बन्नेवाला थियो । त्यहाँका जनसमुदायलाई रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, आधुनिकता, विकास र समृद्धिको दिशामा अघि बढ्न र बढाउन यो अभियानले अझ प्रेरित गथ्र्यो नै ।
प्रदेश नं. ४ को नवलपुरमा अर्को विशाल कार्यक्रम सम्पन्न भयो । त्यहाँ विभिन्न टोली बनाई घरघरमा पुगेर ४ नं. प्रदेश समन्वय कमिटीले मातहतका अगुवा नेता कार्यकर्तालाई व्यवस्थित रूपमा परिचालन गरेको थियो । नवलपुरको कार्यक्रममा जिल्लाका तीनवटा निर्वाचन क्षेत्रका सबै अगुवा कार्यकर्ता, समर्थक र शुभेच्छुक सहभागी भएका थिए । त्यसले निर्वाचनको पक्षमा अत्यन्त भव्य र सानदार योगदान गरेको छ । तत्पश्चात् बर्दघाटबाट थालनी गरेर प्रदेश नं. ५ मा परासीको भुमईमा जनसभा सम्पन्न गरी परासी बजार हुँदै भैरहवा जाने टोलीलाई रोक्न मधेसी मोर्चाका कार्यकर्ताले फेरि कालो झन्डा प्रदर्शन र अवरोध गरे । एमाले उनीहरूसँग लाप्पा खेल्न, अनावश्यक झगडा गर्न, हिंसात्मक वारदात गराउन र उनीहरूसँग युद्ध गर्न त्यहाँ पुगेको थिएन । तसर्थ, भुमहीबाट देवदह, बुटवल चौराहा हुँदै अभियान भैरहवातर्फ लाग्यो । किनभने, एमालेको लक्ष्य भैरहवा थियो । भैरहवाको अञ्चलपुरमा राजविराजपछि मधेसी बाहुल्य क्षेत्रमा अभियानकै सबभन्दा ठूलो र भव्य जनसभा आयोजना भयो, जहाँ मधेसी जनसमुदायको व्यापक सहभागिता थियो । पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले काँकडभिट्टा, विराटचोक, इटहरी, राजविराज, हेटौँडा, नारायणगढ, नवलपुर र भैरहवाका जनसभालाई आफैँले सम्बोधन गरेर जनजागरणलाई नेतृत्व प्रदान गरे । पार्टीका वरिष्ठ नेता खनाल र माधवकुमार नेपाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र महासचिव ईश्वर पोखरेलसहित पार्टीको मूल नेतृत्व नै अभियानमा सहभागी बनेको थियो । यसले मधेसी मोर्चा र अरू विभिन्न पक्षले सिर्जना गरेका तमाम खाले भ्रम तोड्न महत्वपूर्ण सफलता मिलेको छ ।
भैरहवापछि पण्डित नारायणप्रसाद पोखरेलको हत्या भएको रुपन्देहीको रामापुरमा जनसभा भयो । त्यसपछि कपिलवस्तुको ४ नं. जितपुरमा अर्घाखाँची र कपिलवस्तुको संयुक्त जनसभा भयो । अनि चन्द्रौटामा पदयात्रा गर्दै अभियान दाङको लमहीमा रोल्पा, रुकुम र प्युठानका जनता सम्मिलित संयुक्त जनसभामा सहभागी भयो । यो जनसभा यसअघि दाङमा गरिएका अरू जनसभाभन्दा अत्यन्त भव्य र सानदार बन्यो । सभामा व्यापक जनसहभागिता थियो । भोलिपल्ट बाँकेको नेपालगन्जमा त्यस्तै ठूलो जनसभा भयो । तत्पश्चात् अभियान खजुरा भएर गुलरिया पुग्ने कार्यक्रम थियो । तर, त्यहाँ पनि मधेसी मोर्चाको नाममा विभिन्न समूह र नाबालकहरू सम्मिलित जत्थाले अवरोधको प्रयास गरेको जगजाहेर छ । उनीहरूले हिंसा र आतंक मच्चाउने प्रयास गरे । बसमा आगो लगाए । तैपनि, अभियानको लक्ष्य त गुलरिया थियो । त्यसो हुँदा अभियान टाली–कोहलपुर भएर बाँसगढी, मैनापोखर हुँदै गुलरिया पुग्यो ।
एमालेले जुन जिल्ला टेक्यो, त्यहाँ जिल्ला बन्द र अवरोध घोषणा गरिए पनि त्यसलाई छिचोल्दै ३ चैतमा धनगढी र महेन्द्रनगरका विशाल जनसभा सम्पन्न भए । महेन्द्रनगरमा पत्रकार सम्मेलन गरी १६ बुँदामा यस अभियानको समीक्षा र निष्कर्ष सार्वजनिक गरिएको छ । वास्तवमा यस अभियानले सबैलाई नजिकबाट छोएको छ । यसले पूर्व–पश्चिम र उत्तर–दक्षिणका सम्पूर्ण न्यायप्रेमी जनसमुदायलाई परस्परमा जोडेको छ । सुर्खेतमा ५ गते आयोजित जनसभाका साथ अभियान सम्पन्न भएको छ । प्रदेश नं. ६ को सुर्खेतमा आइपुग्दासम्म यस अभियानले मेची–महाकाली महायात्रा र महाजागरण अभियानको स्वरूप ग्रहण गरेर सम्पन्न भएको छ । समग्रमा यो अभियान देशभरिका ५० लाख जनसमुदायबीच पुग्न सफल भएको छ, जनसभामा लाखौँलाखको प्रत्यक्ष सहभागिता भएको छ, २७ हजारभन्दा बढी विभिन्न पार्टीका नेता–कार्यकर्ता एमालेमा समाहित भएका छन् । यसले संविधान कार्यान्वयन, निर्वाचन, सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकताको पक्षमा सिंगो देशलाई तरंगित, जागृत र परिचालित गर्न महत्वपूर्ण सफलता हासिल गरेको छ । मूलतः घोषित स्थानीय तहको निर्वाचनको तम्तयारीका लागि यसले अतुलनीय योगदान गरेको छ ।